At 2/05/2013 09:12:00 PM 1 comment:
( အမိန့်အမှတ်၊ ၆ / ၂၀၁၃)
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်
At 2/05/2013 08:47:00 PM No comments:
ဦးဆန်းဆင့် အား သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး
( အမိန့်အမှတ်၊ ၄ / ၂၀၁၃)
At 2/05/2013 08:46:00 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
( အမိန့်အမှတ်၊ ၅ / ၂၀၁၃)
At 2/05/2013 08:45:00 PM No comments:
GTC ကျောင်းသား ရိုးမဘဏ်ဝင်ဖောက်
ရှမ်းပြည်နယ် အောင်ပန်းမြို့ တွင် GTC ကျောင်းသား လူငယ်တစ်ဦးအား ရိုးမဘဏ်ကို ဖောက်ထွင်းမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူထားကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက် ၁နာရီခန့်က အသက် ၁၉နှစ်ရှိ မောင်---သည်ရိုးမဘဏ် မျက်နှာကျက်မှ ဖောက်ထွင်း ဝင်ရောက်ကာ ငွေ ၁၇၀၀၀ ကျပ် ခိုးယူခဲ့မှုဖြင့် ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဘဏ်မှ သိရသည်။
At 2/05/2013 07:51:00 PM No comments:
အက်ဖ်ဘီအိုင်အဖွဲ့ဝင်များက မြေအောက်ကတုတ်ကျင်းတစ်ခုကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့
ကလေးငယ် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရပုံအနေအထား သရုပ်ပြပုံ
အက်ဖ်ဘီအိုင်အဖွဲ့ဝင်များသည် မြေအောက် ကတုတ်ကျင်းတစ်ခုကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 2/05/2013 05:37:00 PM No comments:
At 2/05/2013 05:36:00 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ် အပေါင်ဆိုင်များတွင် ပစ္စည်းအဆုံးခံ ပေါင်နှံမှုများလာခြင်းကြောင့် အပေါင်ဆုံးပစ္စည်းဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာ
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ အပေါင်ဆိုင်များတွင် ပစ္စည်းအဆုံးခံ ပေါင်နှံသူဦးရေ များပြားလာခြင်းကြောင့် အဆိုပါ အပေါင်ဆုံးပစ္စည်း ပြန်လည်ရောင်းချမှုများ ယခင်ကထက် ပိုမို များပြားလာကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ အပေါင်ဆိုင်များမှ သိရသည်။
At 2/05/2013 05:26:00 PM No comments:
ဦးဆန်းဆင့် သာသနာရေးဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန် မထမ်းဆောင်ဟု ဆုံးဖြတ်
ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးကို လက်ခံခြင်းမပြုဘဲ မူလတာဝန်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့်က ပြောကြားသည်။
At 2/05/2013 05:08:00 PM No comments:
အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်မည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းမှ အခန်းတခန်းလျှင် ငွေကျပ် ၁၈၅ သိန်းမှ သိန်း ၂၀၀ကြား ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ပြည်သူလူထုအမှန်တကယ် လက်လှမ်းမီမည့် ဈေးနှုန်းမဟုတ်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်၊
At 2/05/2013 03:20:00 PM No comments:
မြောက်ဦးမြို့ရှိ ကိုးသောင်းဘုရား (ဓာတ်ပုံ – Wikipedia)
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ရှေးဟောင်းယာဉ်ကျေးမှု နယ်မြေတခု ဖြစ်သည့် မြောက်ဦး အရပ်ဒေသသို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ကို အာဏာပိုင်တို့က အကြောင်းပြချက် တရားဝင် ကြေညာခြင်း မရှိဘဲ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယခင်တစ်ခါ The Voice နှင့် Eleven အပါအ၀င် ကေအိုင်အေ အားပေး ၀က်ဆိုဒ်များကို တိုက်ခိုက်ကြမည် ဆို တုန်း က ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်ယုံမို့ ၀င်ပါကြသည်။ ထိုသို့ တိုက်ခိုက်ကြပြီး kachinnet.net စာမျက်နှာ ဖွင့် မရ တာမြင်တော့ ဟုတ်လှချည်လားဟု ထင်ခဲ့မိသည်။
At 2/05/2013 02:06:00 PM No comments:
ဧရာဝတီမြစ် ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းသွားရန် ယနေ့ကျင်းပသော အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားမြစ်ကြီး ဧရာဝတီထာဝရရှင်သန်စေရေးအတွက် 'ဧရာဝတီမြစ်ကော်မရှင်' ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားရန်အဆိုကို အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးမြင့်က ယနေ့ အဆိုတင်သွင်းသည်။
At 2/05/2013 01:55:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု အသိပေးခြင်း
(၁) ယနေ့ နံနက် (၉း၃၀) မှ (၁၀း၀၀) နာရီအတွင်း (US, Malaysia, Russia)အိုင်ပီလိပ်စာများမှတစ်ဆင့် DDoS Request များ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
(၂) နံနက်(၁၁း၁၀) တွင်လည်း ထပ်မံ တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။
At 2/05/2013 12:19:00 PM No comments:
၁၈၉၂ခုနှစ် နွေရာသီတစ်ခုမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Missouriပြည်နယ်မှာ မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်ခဲ့တယ်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်းမ၊ နေအိမ်၊ လယ်ယာစိုက်ခင်းတွေဟာ တောင်ကျရေရဲ့တိုက်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး လူအများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
At 2/05/2013 10:59:00 AM No comments:
At 2/05/2013 10:54:00 AM No comments:
ခရမ်းချဉ်သီးက နှလုံးဖောက်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းစေနိုင်
ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ပါဝင်သော ဓာတုသတ္တိများက နှလုံးေ ဖာက်ပြန်မှု ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေကြောင်း သုတေသီများက ထောက်ခံ ပြောဆို လိုက်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီး အခွံတွင် ပါရှိသည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းထားသည့် Ateronon ဆေးတောင့်သည်
At 2/05/2013 10:37:00 AM No comments:
Autodidacticism သည် ဂရိ စကားက ဆင်းသက်လာပြီး Auto ဆိုသည်မှာ ကိုယ်တိုင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး didacticism ကတော့ သင်ကြားခြင်း “teaching” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ Didacticism ကို ယနေ့တွင် an artistic philosophy of education ဟု ဖွင့်ထားသည်။ ပညာရေး အနုပညာလို့ ဆိုရမလားပဲ။
At 2/05/2013 10:33:00 AM No comments:
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးရဲ့ ကား ယာဉ်စည်းကမ်း ဖောက်ဟုဆို
သံရုံးကား အချို့သည် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်း စည်းကမ်း ကို မလိုက်
နာ ဆုံး ဖြစ်လာ ရာ အမေရိကန် သံရုံးကား သည် လည်း ဤ သို့ပါဝင်
လာသည် ကို ထင်ရှားသည့် ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ဦး က ယနေ့ မှတ်တမ်းတင်
လမ်းစည်းကမ်း ဖေါက်ဖျက်တဲ့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးရဲ့ ကား
(ဒီနေ့မနက်(၄-၂-၁၃) နံနက် ၉း၀၀ ကျော်လောက်က ရွှေတောင်ကြားကနေ ဓမ္မစေတီလမ်းပေါ်အထွက်)
အေးချမ်းမွန် Facebook မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
At 2/05/2013 10:20:00 AM No comments:
Problems in the NLD?
But new boundaries appear to be emerging. The recent unrest in the National League for Democracy
At 2/05/2013 10:16:00 AM No comments:
ယနေ့ ( ၅.၂.၂၀၁၃) ကျင်ပပြုလုပ်မည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ
၅။ ကြယ်ပွင့်ပြထားသည့် အောက်ပါမေးခွန်းများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များက မေးမြန်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင် များက ဖြေကြားခြင်း-
(က) ဒေါ်ဇာတလဲမ်း၊ ထန်တလန် မဲဆန္ဒနယ်၏ ထန်တလန်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။
At 2/05/2013 09:58:00 AM No comments:
ကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ စနစ်ကို ဘယ်လို သွားမလဲ
နိုင်ငံရေးကို လူ့သဘောတရားအတိုင်း ကြည့်မယ်ဆိုရင် ... အရာရာတိုင်းမှာ ကောင်းနေတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံပုံစံ နိုင်ငံရေး စနစ် (Utopia) ကို ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အရာရာ ပြည့်စုံတဲ့ စနစ်ကို မှန်းပြီး .. အဲဒီ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်ရင်း ပေးဆပ်မှု၊ ဒုက္ခ၊ အမှားအယွင်း၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ရလဒ် စတာတွေကို လက်ခံရပါမယ်။ ပြီးရင် ပြုပြင်သွားရပါမယ်။
At 2/05/2013 09:55:00 AM No comments:
ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (globaltravelmate.com)
အရှေ့တောင်အာရှတွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးထဲ၌ ပါဝင်သော ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ဖျက်သိမ်းကာ ပန်းခြံ (Green Park) အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုကြောင်း သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းက ယမန်နေ့က
At 2/05/2013 09:45:00 AM2comments:
At 2/05/2013 09:38:00 AM No comments:
ပိုဟန် (Pohang) မြို့အလွန် အရှေ့ပင်လယ်ပြင်မှာ လုပ်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ကာလဟာ သုံးရက်ကြာမှာဖြစ်ပြီး၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ ရန်သူ ရေငုပ်သင်္ဘောနောက်ကို နောက်ယောင်ခံ လိုက်ကြည့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ လေယာဉ်ပစ်နဲ့
At 2/05/2013 09:32:00 AM No comments: